Toriteny 05 Oktobra 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny 05 Oktobra 2013
Ohabolana 16 : 1 – 9 / Lioka 12 : 13 – 21 / Jakoba 4 : 13-17
“Manantena fahombiazana ny mino”, ity lohahevitra ity dia mampianatra antsika fa tsara raha mahita fahombiazana ny Fiangonana, misy mantsy ny fahadisoam-pijery ao anatin’ny fiaraha-monina fa ny manan-karena tsy mba hiditra ny fanjakan’ny lanitra. Ahoana ary ny mikasika izany ? Azo tadiavina ve ny harena ? Ao amin’Andriamanitra ny harena rehetra ; fa ampianariny antsika anio ny toe-tsaina tokony hananana entina miatrika izany.
1- Mivelona amin’ny fahamarinana
Eo ampikatsahana ny harena dia tsy maintsy miaina sy mandeha amin’ny fahamarinana ny mino
Ohab 16: 8. Tenim-pahendrena ary tolo–tsaina azo avy amin’Andriamanitra izany. Ny bokin’i Lioka ihany koa dia mampianatra fa tsy tokony ho amin’ny fieremana [fitiavam-bola tafahoatra ] ny mino. Tokony ho fantatry ny mino fa ny harena rehatra dia avy amin’Andriamanitra izay hetsika ataontsika ho fampitomboana izany harena izany dia samy handalo eo ambany mason’Andriamanitra avokoa ; isika dia napetrak’Andriamanitra ho mpitantana ihany eto ambonin’ny tany ka izay tsy marina ao anatin’izany fitantanana izany dia tsy maintsy iharan’ny fitsaran’Andriamanitra.
2- Manankina ny zavatra kasaina atao eo amin’Andriamanitra
Ny fikasan’ny fo dia an’ny olona fa ny fahatanterahana kosa dia an’Andriamanitra. Izany dia manambara fa na toy inona na toy inona risi-po ananan’ny olona eo amin’ny fanantanterahana ny fikasany dia ho very maina sy tsy haharitra izany raha tsy apetraka amin’Andriamanitra ; ary Izy Andriamanitra rahateo no mihazona ny fahavelomantsika. Koa aoka isika mpino ahatsiaro mandrakariva fa an’Andriamanitra ary avy Aminy izay rehetra eo amin’ny fiainantsika [fahasalamana , harena, fanambinanana , sns…]
3- Mikatsaka ny haren’ny lanitra
Misintona ny saintsika ny Tenin’Andriamanitra hametram-panontaniana hoe manoloana ny fikelezan’aina amin’ny asa fameloman-tena manao ahoana ny fikelezana aina amin’ny fikatsahana ny haren’ny lanitra ? Ny tena loharanom-pitahiana ahitam-pahombiazana dia ny fikatsahana ny haren’ny lanitra “Katsaho aloha ny fanjakan’ny lanitra dia hanampy ho anao ny zavatra rehetra”. (Mat 6:33). Mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika raha tsy mikatsaka sy manao ho vaindohan-draharaha izany haren’ny lanitra izany.
Ho famehezana izay rehetra voalaza ary, mampianatra antsika Andriamanitra amin’ny alalan’ny Teniny fa antoky ny fahombiazana ho an’ny mino ny fanekena an’I Jeso ho Tompo sy Mpamonjy, mpialoha lalana ny fiainana. Ny olona manana an’I Jeso no mahay mandeha amin’ny fahitsiana sy mahatsiaro fa tsy mahefa na inona na inona raha tsy amin’ny alalan’Izy Tompo ary ny fanapahan-kevitra hanao ho vaindohan-draharaha ny fikatsahana ny haren’ny lanitra
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 8 octobre 2013